Abantu babhalisa nini kwiiWebinars? | Martech Zone
Abantu babhalisa nini kwiiWebinars?
NgoLwesihlanu, Meyi 31, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abantu abakhulu ON24, Ukusasazwa kweWebhu, uMsitho oBonakalayo kunye nomnikezeli wezisombululo zeWebinar, zibonelele ngengqondo enkulu kuzo naziphi na iinkampani ezenza iiwebhu. Sithanda ii-webinars apha Martech Zone kwaye sisebenzisana namaqabane ethu ukukhuthaza nokubaphumeza.
Nazi iingcebiso ezi-4 zokuphucula iiWebinars zakho
Ababekho kwiWebhsayithi bayalibazisa. I-64% irejista ngeveki yewebhu ekhoyo. Kwaye abavelisi bewebhu kufuneka basoloko besenza "usuku lomnyhadala" wokuqhushumba ukufumana ababhalisayo ngomzuzu wokugqibela, njenge-21% yokubhalisa ngomhla we-webinar.
TGIF! Thumela ii-imeyile zentengiso ngolwe-Lwesibini, kuba abantu babhalisa ngolwe-Lwesibini ngaphezulu kwalo naluphi na olunye usuku-kwaye ngaphezulu kokuphindwe kabini kunangooLwezihlanu.
Cinga ngendalo yonxweme. Uninzi ON24 Ii-webinars ziqala nge-11 kusasa ngeXesha lePasifiki, xa kufanelekile kuwo omabini amanxweme, ngokwenyusa ubhaliso kunye nokuzimasa.
Nanini na ukujonga. Ababukeli abafunwayo bayakhula. Idatha yebhentshi ye-ON24 ibonisa ukuba i-avareji ye-25% yabo babhalisela i-webinar ngaphambi komhla ophilayo bajonge ingxelo egciniweyo yomsitho.
Abantu babhalisa nini kwiWebinar yakho?
Nazi izibalo ezikhawulezayo kubhaliso lweWebinar… cofa apha ukukhuphela iNgxelo yeBeninmark Benchmark yonke.
tags: kwi-infographicUkuthengisa iWebinarBhalisoUbhaliso lwewebhu
Ukwahlulwa koRhwebo loLuntu
Iindleko zeDatha eninzi kakhulu